Israa'iil oo dalbatay in la kordhiyo muddada xabadjoojinta - BBC Somali
Israa'iil oo dalbatay in la kordhiyo muddada xabadjoojinta
7 Agoosto 2014
Image caption Falastiiniyiin badan oo ka faa'ideysanaya xabadjoojinta oo soo arkaya haddii guryahooda la duqeeyay
Maamulka Israa’iil ayaa xaqiijiyay inay diyaar u tahay sidii loo dheereyn lahaa xabadjoojinta 72-da saac ah oo ay oo ay labada dhinac kala dhex dhigtay dowladda Masar kadib bil dagaal uu ka socday Qaza.
Wadahadallada ku saabsan sidii loo heli lahaa xabadjoojin xilli dheer ah ayaa weli ka socda magaalada Qaahira.
Balse sarkaasl sare oo ka tirsan kooxda Xamaas oo kusugan dalka Masar ayaa sheegay inuusan jirin heshiis ku saabsan kordhinta xilliga xabadjoojinta.
Mar uu ka hadlaayay magaalada Washington, madaxweyne Obama ayaa sheegay inay jiraan siyaabo loogu guuleysan karo xabadjoojin waqti dheer gaarta, laakin ay halista raadinayaan siyaasiyiinta uu sheegay inay ka mid yihiin labada dhinac. Waxa uu xaqiijiyay in ladoonayo in la dhiso is aaminaad.
Qaramada midoobey ayaa sheegtay in 1300 oo ka mid ah dadka Falastiiniyiinta ee ku dhintay Qaza inay ahaayeen shacab. In kabadan 400 oo ka mid ah ay caruuryihiin. Tirade guud eek u dhimatay duqeynta Qaza ayaa la sheegayaa inay ka badan tahay 1800 oo qof.
Ra’iisul wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, ayaa shirjaraa’id ka sheegay inay maskax ahaan iyo shaqo ahaanba ay qalad ahaan lahayd haddii aysan Israa’iil iska difaacin gantaalada Xamaas.
Duulaanka Israa’iil ay ku qaaday Qaza ayaa si ballaaran loo cambaareeyay, waxaana taasi sabab u ah shacabka aadka u badan ee ku dhintay duqeynta ay ka geysatay Qaza.